Figure (1) - How to send SMS
When you want to buy the song from Myanmar Music Store,you have to send your desire song code to our message center number 8204 (or) 8605 (you can also save as Myanmar Music Store in your contact) with proper way as we describe above picture.
တေးသီချင်းဝယ်ယူရန် သင်ရွေးချယ်ထားသော သီချင်း၏ Code အား Myanmar Music Store ၏ Message Center Number 8204 (သို့ မဟုတ်)8605 သို့SMS ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။(Message Center Number အား Myanmar Music Store ဟု လူကြီးမင်းတို့၏ Phone Contact တွင်လည်း သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။) SMS ပေးပို့ရာတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောSMS နမူနာ ပုံစံအတိုင်း ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (2) - How SMS Return
If you have enough phone bill to buy your request song, we'll send download link for your purchase song. Your phone need to be connected with internet connection.(Phone Internet or Wifi Connection)
ဝယ်ယူမှုပြီးဆုံးပါက ဝယ်ယူထားသော Song ၏ Download Link အားလက်ခံ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Download Link အား SMS မှတဆင့် ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းအား လိုင်းမိသော နေရာများတွင် ထားပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ SMS ရရှိရန် 5-10 မိနစ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းသည် အင်တာနက် Connection ချိတ်ဆက်ထားရမည်။(ဖုန်းအင်တာနက် သို့မဟုတ် Wifi Connection)
Figure (3) - If you do not have not enough phone bill?
If you do not have enough amount in your phone bill,you'll receive the notification message. Your purchased will not be complete.
လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းတွင် လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက Notification Message (အသိပေးအကြောင်းကြားစာ) အားလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်း sms ပေးပို့ သည့် ပုံစံ မှားယွင်းပါကလဲ Invalid Song Code Notification Message (အသိပေးအကြောင်းကြားစာ) အားလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Figure (4) - How to send gift song to your friends.
When you want to sendasong asagift to your friend, please send your desire song code to our center number 8605 (you can also save as Myanmar Music Store in your contact) with proper style as we describe in above picture. But be sure that you send with proper SMS style. Otherwise your request will not be complete.
Gift Song ပေးပို့လိုသူများ အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စံပုံစံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ Message Center Number 8605 သို့ SMS ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။(Message Center Number အား Myanmar Music Store ဟု လူကြီးမင်းတို့၏ Phone Contact တွင်လည်း သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။) ပေးပို့ရာတွင် မိမိပေးပို့လိုသော ဖုန်းနံပါတ်၏အရှေ့ တွင် "959" ပါရှိရန် အထူးဂရုပြုရပါမယ်။
Figure (4) - How to download song on your IOS .
When you want to buy the song from Myanmar Music Store,you have to send your desire song code to our message center number 8204 (or) 8605 .You must be download myanmar music store application at apple appstore.If you download application complete,you insert sms return link to box of download section of application.After download success ,you can listen song on bought section of application
ios user များအတွက် sms ပေးပို့ ဝယ်ယူထားသည့် link ကို download လုပ်ရန် ဦးစွာ myanmar music store application အား app store မှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီး register ပြုလုပ်ထားရပါမည် ။ဖော်ပြပါ ပုံ အတိုင်း application ၏ download လုပ်ရန် တွင် သွားရောက်၍ myanmar musicstore မှ ပေးပို့ သော လူကြီးမင်းဝယ်ယူထားသည့် sms link အား copy ယူပြီး download ပြုလုပ်မည့် box တွင် ထည့်ပြီး download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်
download ပြုလုပ်ပြီးပါက application ၏ ၀ယ်ယူထားသော section မှ download လုပ်ပြီး တွင် သွားရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်